2021 Chikumi Alibaba Pamhepo Tsika Yepasirose Liveshow Chirongwa
ne admin pane 21-06-07
Zuva: 15:00 pm, Chikumi 17th CST 1. Kuunzwa kwenyaradzo mweya nyowani kupisa kupora mhepo yekufema 2. Kupinza uye kushandiswa kweimwechete kamuri ERV 3. WIFI kudzora DMTH akateedzana ERV + bvunzo yeUVC d ...
2021 Alibaba Live Broadcast Chirongwa
Rarama Nguva Yakakura Zviri Mukati Mahosi QR Code Rarama paAlibaba 14: 00pm, Kurume 4th (CST) Eco Vent Pro Plus Energy Saving Ventilation uye PPE Zvigadzirwa Kugadzira Cleanroom Service Tom, Andrew https: //activity.ali ...
Pros & Cons: Modular vs Tsika Yakachena dzimba Dzemadziro
ne admin pane 21-01-22
Kana zvasvika pakugadzira imba yekuchenesa nyowani, hombe, uye pamwe sarudzo yekutanga yaunofanirwa kutora ndeyekuti imba yako yekuchenesa ichave ine modular kana yechinyakare kuvakwa. Iko kune mabhenefiti uyeganhurirwa kune yega yeaya sarudzo, uye zvinogona kunetsa kusarudza ...
Vanochenesa mweya vanonyatsoshanda here?
ne admin pane 21-01-18
Zvichida iwe une allergies. Pamwe wawana imwe yakawandisa yekuzivisa nezve pamusoro pehunhu hwemhepo munzvimbo yako. Pamwe wakazvinzwa zvinogona kubatsira kudzivirira kupararira kwe COVID-19. Chero zvingave chikonzero chako, urikufunga kutora chinonatsa mweya, asi zvakadzika pasi, haugone kubatsira ...
AHU Coil Yekudzivirira Nguva Yekutungamira
Mvura yanga ichishandiswa kutonhodza uye kupisa mweya mune yakagadziriswa-chubhu yekupisa kupisa maoil kubvira kubvira kutanga kwekudziya uye kutonhodza mhepo. Kutonhora kweiyo fluid uye iyo inokonzeresa coil kukuvara zvakare ave aripo akaenzana akareba nguva. Iri dambudziko rakarongeka iro ...
Musiyano uripo pakati pePositive & Negative Pressure Yakachena
ne admin pane 20-12-22
Kubva 2007, Airwoods yakatsaurirwa kupa yakazara hvac mhinduro kune akasiyana maindasitiri. Isu tinopawo nyanzvi yekuchenesa imba mhinduro. Neve-mumba vagadziri, venguva yakazara mainjiniya uye vakazvipira mamaneja eprojekiti, yedu exper ...
Izvo zvakakosha zveFFU uye Dhizaini Dhizaini
ne admin pane 20-12-17
Chii chinonzi Fan Filter Unit? Iyo fan fan firuniti kana FFU yakakosha laminar kuyerera diffuser ine yakasanganiswa fan uye mota. Iyo fan uye mota iriko kuti ikunde iyo inomira kumanikidza kweiyo yepakati yakaiswa HEPA kana ULPA firita. Izvi zvinobatsira ...
Indasitiri yezvikafu inobatsirwa sei nedzimba dzakachena?
ne admin pane 20-11-15
Hutano uye hutano hwemamirioni zvinoenderana neve vagadziri 'uye mapakeji' kugona kuchengetedza nzvimbo yakachengeteka uye isina chena panguva yekugadzirwa. Ichi ndicho chikonzero nei nyanzvi muchikamu ichi dzakabatwa kune akaomesesa zviyero kupfuura ...
Airwoods HVAC: Mongolia Zvirongwa Kuratidzira
ne admin pane 20-10-28
Airwoods yakabudirira kuita pamusoro pemapurojekiti makumi matatu muMongolia. Kusanganisira Nomin State department Chitoro, Tuguldur Shopping Center, Hobby International Chikoro, Sky Garden Residence nezvimwe. Isu takatsaurira kutsvagisa uye tekinoroji develo ...
Kuisa Zvimedu ZveBangladesh PCR Project
ne admin pane 20-10-26
Kurongedza uye kurodha mumudziyo mushe ndiyo kiyi yekuendesa iko kutumira muchimiro chakanaka kana mutengi wedu agamuchira kune rimwe divi. Kune aya mapurojekiti eBangladesh yekuchenesa, maneja weprojekti wedu Jonny Shi akasara panzvimbo kuti atarise nekubatsira kuita kwese kurodha. Iye ...
8 Unofanirwa Kudzivisa Kuchenesa mweya Kupinza Kuisa Zvikanganiso
ne admin pane 20-10-21
Iyo yekufefetwa system ndeimwe yezvakakosha zvinhu mune iyo Yakachena imba dhizaini uye yekuvaka maitiro. Iyo sisitimu yekumisikidza maitiro ine yakanangana nekukanganisa pamarabhoritari nharaunda uye yakachena michina 'mashandiro uye kugadzirisa. Zvakawanda ...
Inowanzo Bvunzwa PCR Labs Mibvunzo (Chikamu B)
ne admin pane 20-09-24
Parizvino ruzhinji rweyazvino Covid-19 bvunzo iyo mishumo yese iri kubva irikushandisa PCR. Iko kuwedzera kukuru kwePCR bvunzo dzichiita PCR lab iri inopisa nhaurwa mune yekuchenesa indasitiri. MuAirwoods, isu tinoona zvakare kuwedzera kwakakura kwePCR lab lab ...
Inowanzo Bvunzwa PCR Labs Mibvunzo (Chikamu A)
ne admin pane 20-09-22
Kana kugadzira mushonga wekudzivirira ndiwo mutambo murefu pakurwisa runyorwa coronavirus, kuyedza kwakanaka ndiwo mutambo mupfupi sekuti varapi uye vakuru vehutano hweveruzhinji vachitsvaga kudzora kuputika kwehutachiona. Nenzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika dzinovhurazve zvitoro uye servi ...
Ndezvipi zvinhu zvakakosha zve dhizaini dhizaini?
ne admin pane 20-09-21
Makamuri ekuchenesa anoshandiswa mune angangoita maindasitiri mune zvidiki zvidiki zvinogona kukanganisa maitiro ekugadzira. Nekukurumidza kukura kwehupfumi hwemagariro, kunyanya kuyedza kwesainzi uye yepamusoro-tekinoroji yekugadzira ...
Maitiro ekuisa zvakachena zvigadzirwa mumidziyo yekutakura
ne admin pane 20-09-08
Yakanga iri Chikunguru, mutengi akatumira kontrakiti kwatiri, kutenga mapaneru uye profiles zvealuminium zvehofisi yavo irikuuya uye mapurojekiti echando echando. Yehofisi, ivo vakasarudza girazi magnesium zvinhu sangweji pani, nehukuru hwe50mm. Izvo zvinhu zvinodhura-zvinobudirira, moto ...
2020-2021 HVAC Zviitiko
ne admin pane 20-08-26
Zviitiko zveHVAC zviri kuitwa munzvimbo dzakasiyana siyana pasi rese kukurudzira misangano yevatengesi nevatengi pamwe nekuratidzira tekinoroji yazvino mumunda wekupisa, kufefetedza, kutonhodza mweya uye firiji. Chiitiko chikuru chekutarisa kunze ...
Dos uye Dont yeMolecular Testing
Maitiro ekuona mamorekuru ane kugona kuburitsa huwandu hwakawanda hweiyo nucleic acid kuburikidza nekukwirisa kwehuwandu hwakawanda hunowanikwa mumasampuli. Kunyangwe izvi zvichibatsira mukugonesa kuona, zvinotaurazve ...
Matipi Ekugadzira Hofisi HVAC Sisitimu
ne admin pane 20-06-24
Nekuda kwedenda repasi rese, vanhu vari kuwedzera uye nehanya nezvekuvaka mhando yemhepo. Mhepo nyowani & yehutano inogona kudzikisira njodzi yekubatwa nechirwere uye kuyambuka-hutachiona hwehutachiona mune dzakawanda zviitiko zveveruzhinji. Kuti ikubatsire iwe kunzwisisa yakanaka nyowani mhepo syste ...
Masayendisiti Anokurudzira WHO Kuongorora Hukama Pakati Pehuhu uye Hutori Hwoutano
ne admin pane 20-05-25
Chikumbiro chitsva chinodaidzira kuWorld Health Organisation (WHO) kuti itore nekukurumidza danho rekumisikidza hutungamiriri hwepasi rose pahunhu hwemhepo yemukati, nezano rakajeka pamugumo wakaderera wemhepo inonyorova muzvivakwa zveveruzhinji. Iyi danho rakakomba raizodzora ...
China Yakatumira Nyanzvi dzezvekurapa kuEthiopia Kurwisa Kurwisa Coronavirus
ne admin pane 20-04-17
Chikwata chekuChinese chinorwisa denda rekurapa nhasi vasvika kuAddis Ababa kuzogovana ruzivo uye kutsigira kuyedza kweEthiopia kumisa kupararira kwe COVID-19. Chikwata chinogamuchira nyanzvi dzezvechiremba gumi nembiri dzichapinda mukurwisa kupararira kwecoronavirus kwemavhiki maviri ...
Cleanroom Dhizaini mune gumi Nyore Matanho
ne admin pane 20-04-14
"Nyore" rinogona kunge risiri izwi rinouya mupfungwa dzekugadzira dzakadai nzvimbo dzakaomarara. Nekudaro, izvo hazvireve kuti haugone kuburitsa yakasimba solidroom dhizaini nekugadzirisa nyaya nenzira inoteedzana. Chinyorwa ichi chinofukidza nhanho imwe neimwe yakakosha, kudzikira kune inobatsira-yakatarwa ti ...
Maitiro Ekushambadzira HVAC Munguva yeCoronavirus Pandemic
ne admin pane 20-04-01
Kutumira mameseji kunofanirwa kutarisisa pamatanho ehutano, dzivisa kunyanyisa.Wedzera kushambadzira kune iyo rondedzero yemabhizinesi akajairika ayo anokura zvakanyanya kuomarara sezvo huwandu hwezviitiko zvecoronavirus hunowedzera uye maitiro acho achiwedzera. Vemakondirakiti vanofanirwa kusarudza kuti vangani ...
Kutungamira Vatengi kuburikidza neImukati Yemhepo Mhando uye iwo Matipi Ekuchengetedza IAQ
Kupfuura nakare kose, vatengi vane hanya nemhepo yavo yemhando.Nezvirwere zvekufema zvinodzora misoro uye vanhu vanotambura neasthma uye allergies, iwo mweya wemweya watinofema mudzimba medu uye nemukati medzimba hauna kumbonyanya kukosha ...
Pane Mumwe Mugadziri Angave Anovhiya Mask Mugadziri?
ne admin pane 20-03-30
Izvo zvinokwanisika kune generic gadzira, senge fekitori yehembe, kuti ive mask yekugadzira, asi kune akawanda matambudziko ekukunda. Izvo zvakare hazvisi zvehusiku, nekuti zvigadzirwa zvinofanirwa kubvumidzwa nemitumbi mizhinji nesangano ...
Yakachena Yekuvaka FAQ
ne admin pane 20-03-19
Nei Uchifanira Kuwana Rubatsiro Kuvaka Iyo Yakachena imba? Kuvakisa dzimba dzekuchenesa, zvakanyanya sekuvaka chivakwa chitsva, zvinoda zviuru zvevashandi, zvikamu, zvigadzirwa, uye dhizaini kufunga. Sourcing zvinhu uye kutarisira kuvaka kweiyo nyowani nzvimbo hachisi chinhu chaungambotora ...
Chinodiwa cheMhepo yekufefetera muazvino Architecture
ne admin pane 20-02-20
Iine inoenderera mberi kuvandudzwa kwemhepo yekufema tekinoroji. Vanhu vanokwanisa kudzora nzvimbo yemukati muchivako uye nekugadzira yakanaka yemukati mamiriro ekunze. Nekudaro, Mune mamiriro ekushomeka kwepasirese kwe ...
Airwoods Inobudirira Inoratidzwa pa2020 BUILDEXPO
ne admin pane 20-02-19
Yechitatu BUILDEXPO yakaitwa musi wa24 - 26 Kukadzi 2020 paMillennium Hall Addis Ababa, Ethiopia. Yaive nzvimbo imwechete yekuwana zvigadzirwa zvitsva, masevhisi uye tekinoroji kubva kutenderera pasirese. Ambassadors, vatengesi vevamiriri uye vamiririri vanobva kwakasiyana siyana c ...
Kugamuchirwa kuAIRWOODS Booth kuBUILDEXPO 2020
ne admin pane 20-02-04
Airwoods ichava yechitatu BUILDEXPO kubva 24 - 26 Kukadzi (Mon, Tue, Wed), 2020 kuStand No. 125A, Millennium Hall Addis Ababa, Ethiopia. Panzvimbo yeNo.125A, hapana mater uri muridzi, kontrakta kana mupi wezano, unogona kuwana yakagadzirirwa HVAC michina & yekuchenesa s ...
4 Nyaya Dzakajairika HVAC Nyaya & Maitiro Ekuzvigadzirisa
ne admin pane 20-01-17
Zvinetso mukushanda kwemuchina wako zvinogona kutungamira mukudzikiswa kwekuita uye kugona uye, kana ikasiiwa isina kuzivikanwa kwenguva refu, inogona kutokonzeresa nyaya dzehutano. Muzviitiko zvakawanda, izvo zvinokonzera kusashanda zvakanaka inyaya dziri nyore. Asi kune avo vasina kudzidziswa muHVAC ...
Mashandiro anoita Chiller, inotonhorera Shongwe uye Yemhepo Inobata Chikamu Chinoshanda Pamwe
ne admin pane 19-12-09
Chiller, inotonhorera Shongwe uye Mhepo Inobata Chikamu chinoshanda pamwechete kupa mhepo yekugadzirisa (HVAC) kuchivako. Muchinyorwa chino tichave tichifukidza musoro uyu kuti tinzwisise mabviro eiyo HVAC yepakati chirimwa. Inoita sei chiller inotonhora shongwe uye AHU inoshanda pamwechete Iyo huru system componen ...
Kunzwisisa Simba Kudzoreredza muRotary Heat Shanduri
ne admin pane 19-12-03
Makiyi ehunyanzvi ehunyanzvi anokanganisa kushanda kwesimba Kunzwisisa Kudzoreredza kwesimba mumhepo inoshandura kupisa- Zvinhu zvakakosha zvehunyanzvi zvinokanganisa kugona kwesimba Masisitimu ekudzoreredza anogona kukamurwa muzvikamu zviviri zvichibva pamatanho ekupisa esisitimu: Maitiro ekugadzirisa simba ...
AHRI Inoburitsa Nyamavhuvhu 2019 US Kupisa uye Kutonhora Midziyo Yekutakura Dhata
ne admin pane 19-09-15
Residential Storage Water Heaters US zvinyorwa zvekugara gasi zvekuchengetera mvura zvinopisa munaGunyana 2019 zvakawedzera .7 muzana, kusvika 330,910 mayuniti, kubva kubva ku328,712 mayuniti akatumirwa munaGunyana 2018. Nzvimbo dzekugara dzemagetsi dzekuchengetera mvura dzemvura dzakawedzera 3.3 muzana munaGunyana 2019 kusvika 323, .. .
Airwoods Zvibvumirano neEthiopia Airlines Yakachena Kamuri Project
ne admin pane 19-06-19
Musi waChikumi 18th 2019, Airwoods yakasaina Chibvumirano neEthiopia Airlines Boka, kuti itenderane neiyo ISO-8 Yakachena Kamuri Yekuvaka Project yeA Ndege Oxygen Bhodhoro Rekugadzirisa Workshop. Airwoods inosimbisa hukama hwehukama neEthiopia Airlines, inoratidza zvakakwana hunyanzvi hweAirwoods uye kunzwisisa ...
Cleanroom Technology Musika - Kukura, Maitiro, uye Forecast (2019 - 2024) Wepamusoro Wemusika
ne admin pane 19-06-06
Musika wehunyanzvi hwekamuri yekuchenesa wakakosheswa kuUS $ 3.68 bhiriyoni mu2018 uye inotarisirwa kusvika pamutengo weUS $ 4.8 bhiriyoni na2024, paCAGR ye5.1% panguva yekufungidzira (2019-2024). Pakave nekuwedzera kuri kudiwa kwezvigadzirwa zvakasimbiswa. Kwakasiyana mhando zvitupa, senge ISO chec ...
Kamuri Yakachena - Hutano neKuchengetedzwa Kufunga kweKuchenesa
ne admin pane 19-05-05
Global Standardization Inosimbisa Yemazuva Ano Yakachena Kamuri Indasitiri Iyo yepasi rose chiyero, ISO 14644, inotarisa hwakawanda hwakawanda hwekamuri yekuchenesa tekinoroji uye inobata kuvimbika munyika dzakawanda. Iko kushandiswa kweiyo cleanroom tekinoroji inobatsira kudzora pamusoro pemhepo kusvibiswa asi inogona zvakare kutora imwe conta ...
Mashandisiro anoita HVAC Munda
ne admin pane 19-04-18
Nzvimbo yemunda weHVAC iri kuchinja. Ndiwo mafungiro anga achinyanya kuoneka pa2019 AHR Expo ino rapfuura Ndira muAtlanta, uye ichiri kuonekera mwedzi yakati gare gare. Vatariri vezvivakwa vachiri kuda kuti vanzwisise kuti chii chaizvo chiri kuchinja- uye nemabatiro avanogona kuita kuti vaone kuvaka kwavo ...
2018's Kuteedzera Mirayiridzo - Yakakura Kupfuura Simba-inoponesa Standard muNhoroondo
ne admin pane 19-04-17
Dhipatimendi idzva rezvekuchengetedzwa kwemagetsi muDhipatimendi reMagetsi reUS (DOE), rinotsanangurwa se "chiyero chikuru kwazvo chekuchengetedza magetsi munhoroondo," richakanganisa zviri pamutemo bhizimusi rekudziya uye kutonhora indasitiri. Iwo matsva matanho, akaziviswa muna 2015, akarongerwa kuti atange kushanda Ndira 1, 2018 uye achachinja ...
Kuvakwa kweAirwoods HVAC Oversea Dhipatimendi Hofisi Idzva
ne admin pane 19-03-17
Ihofisi nyowani yeAirwoods HVAC iri kuvakwa kuGuangzhou Tiana Technology Park. Nzvimbo yekuvaka inenge 1000 mita mita, kusanganisira hofisi hofisi, matatu emakamuri emusangano ane diki, yepakati uye yakakura saizi, mukuru maneja hofisi, hofisi yemabhuku, hofisi maneja, imba yekusimbisa ...
HVAC Musika Kubata Rs 20,000 Crore Maka naFY16
ne admin pane 19-02-20
MUMBAI: Musika weIndia wekupisa, kufefetedza uye mweya (HVAC) musika unotarisirwa kukura ne30 muzana kusvika pamusoro pe20,000 crore mumakore maviri anotevera, kunyanya nekuda kwekuwedzera kwebasa rekuvaka muzvivakwa uye muzvivakwa. Chikamu cheHVAC chakura kusvika pamusoro peRs 10,000 cro ...
Isu Kuchengeta Yako Yakachena Kamuri Yemhando, Solution Inopa kune Yakachena Kamuri
ne admin pane 19-02-14
Kudza mutengi yakachena mukamuri yekuvaka yemukati chirongwa chechitatu - Cargo Kuongorora & kuendesa pamberi peCYY zororo. Panel inofanira kuongororwa mhando, uye kupukutwa rimwe nerimwe usati waunganidzwa. Paneri yega yega inoratidzirwa yekutarisa kuri nyore; uye kuunganidzwa zvakarongeka. Kuwanda kwekutarisa, uye nerondedzero runyorwa ...
Airwoods Yakagamuchira Mubairo weVazhinji Vanogona Gree Dealer
ne admin pane 18-12-26
Iyo 2019 Gree Central Mhepo Inogadzirisa Nyowani Zvigadzirwa Musangano uye Yegore Rakanaka Mutengesi Mutengo Mhemberero yakaitwa muna Zvita 5th, 2018 ine dingindira reGree Innovation Technology, Artificial Intelligence future. Airwoods, semutengesi weGree, akapinda mumhemberero iyi uye akakudzwa ...
Global Mhepo Kubata Yuniti (AHU) Musika 2018 neVagadziri, Matunhu, Type uye Chikumbiro, Forecast kusvika 2023
ne admin pane 18-11-27
Global Mhepo Kubata Yuniti (AHU) Musika unotsanangura zvese zvizere kufukidza chigadzirwa tsananguro, chigadzirwa mhando, makambani makiyi, uye kunyorera. Chirevo ichi chinofukidza ruzivo rwakakosha rwakamisikidzwa zvichibva neanogadzira mhepo (ahu) nharaunda yekugadzira, vatambi vakuru, uye mhando yechigadzirwa inozo pr ...
HVAC R Expo yeiyo BIG 5 Exhibition Dubai
ne admin pane 18-10-27
Kugamuchirwa kuKushanyira Bhokisi Redu kuHVAC R Expo yeBIG 5 Exhibition Dubai Kutsvaga yazvino mhepo yekugadzirisa uye zvigadzirwa zvemhepo zvinoenderana nemapurojekiti ako? Uya kuzosangana neAIRWOODS & HOLTOP kuHVAC & R Expo yeBIG5 Exhibition, Dubai. Dumba NO.Z4E138; Nguva: 26 kusvika 29 Mbudzi, 2018; A ...
Vocs Kurapa - Inozivikanwa sePamusoro-Tech Enterprise
ne admin pane 18-08-01
Airwoods - HOLTOP Environmental Protection Piyona mukuchengetedza kwezvakatipoteredza ye lithiamu bhatiri yekuparadzanisa indasitiri Airwoods - Beijing Holtop Environmental Protection Technology Co, Ltd. inosimbiswa sebhizimusi repamusoro. Inosanganisira mumunda wekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye zviwanikwa r ...
HVAC Chigadzirwa Certification CRAA Yakapihwa HOLTOP AHU
Iyo CRAA, HVAC Chigadzirwa Certification Yakapihwa kune Yedu Compact Rudzi AHU Mhepo Inobata Chikamu. Inoburitswa neChina firiji uye mhepo yekugadzirisa indasitiri kushamwaridzana kuburikidza nekuyedza kwakasimba pahunhu hwechigadzirwa nekuita. CRAA certification ndeye chinangwa, chakaringana uye chine mvumo yekuongorora
HVAC Makambani China Refrigeration HVAC & R Fair CRH2018
ne admin pane 18-04-12
The 29th China Refrigeration Fair yakaitirwa muBeijing panguva yaApril 9 kusvika 11, 2018. Makambani eAirwoods HVAC akapinda mudariro pamwe nekuratidzwa kweiyo nyowani ErP2018 inoenderana yekugara yekupisa simba yekudzoreredza zvigadzirwa zvemhepo, chitsva chakagadzirwa ductless mhando nyowani mweya mweya mairi, mhepo inobata zvikamu. ..
Airwoods HVAC Maitiro Solution Gadzirisa Nyaradzo yeImukati Mhepo Mhando
ne admin pane 17-08-27
Airwoods anogara achiedza zvakanakisa kupa optimize HVAC mhinduro yekugadzirisa enzvimbo mamiriro ekunyaradza. Yemukati mamhepo mweya yakadai yakakosha nyaya yekuti kuchengetedzwa kwevanhu. Iyo indoor nharaunda yakapetwa kaviri kana kashanu zvine chepfu kupfuura iyo yekunze nharaunda, sekureva kweUS Environmental Environmental ...
HVAC Zvigadzirwa Nyowani Showroom yakavambwa
ne admin pane 17-07-01
Nhau dzakanaka! Muna Chikunguru 2017, imba yedu yekuratidzira nyowani yakavambwa uye yakavhurwa kune veruzhinji. Ikoko kunoratidzira HVAC zvigadzirwa (Heating Ventilation Mhepo Inodzora): yekutengesa mweya kutonhodza, maindasitiri epakati emhepo kutonhodza, mweya kune yemhepo ndiro yekushambadzira kupisa, rotary kupisa vhiri, kuchengetedzwa kwenzvimbo mazwi ...